Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ဒုတိယအကြိမ်မြောက်တလဲ ”မှတ်မိနေဆဲပါ”
အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် လူမှုရေးကိစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်တိုစရာ စိတ်ရှုပ်စရာတွေ ကြုံလာတဲ့အခါ
ငါ့ရဲ့စာပိုဒ်လေးကို သတိရပါ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ နင်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တဲ့အခါ ငါ့လိုပဲစိတ်ကို
ကျွန်တော်ဆိုက်ပရပ်စ် မလာခင်ညက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကရေးပေးလိုက်တာပါ
ဒီစာလေးကိုပြန် ဖတ်တိုင်း ငိုချင်သလို ဝမ်းနည်းသလိုလို ခံစားမိတယ်
သည်းခံတတ်လာတော့လဲ ဒါမျိုးလေးတွေ ကြုံရပြီပေါ့
ငွေလဲအလုံအလောက်ပါတယ် အလုပ်မရှိပေမယ့် ပူစရာမလို ဘူး ဒီလို အလုပ်မျိုးတွေလဲ
မလုပ်နိုင်ပါဘူးနော်(အဲဒီအချိန်က ကျနော် သင်္ချိုင်းမှာ အုတ်ဂူရှင်းနေတာကိုပြောချင်းဖြစ်သည်)
ပိုက်ဆံကုန်ရင်အိမ်ကိုလှမ်းမှာလိုက်မယ် ချေးတာဌားတာ ဝါသနာမပါသလို
”အေးပါကောင်မရယ်..ငါတို့ကလဲမချေးပါဘူး အချင်းချင်းဟာလဲ မခိုးစားပါဘူး ဟင်း..ဟင်း”
ဒီစကားတွေက ဘယ်သူ့ ကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတာလဲဆိုတာ ကျွန်တော်လဲသိ ..
ကျွန်တော့်တို့ အိမ်မှာနေတဲ့သူ အားလုံးလဲသိတယ်လေ
အရင်ကဆို မခံချင်စိတ်နဲ့ ပြန်ပြောမိမယ်..တစ်ခုခုလုပ်မိမယ်လို့
ပြောကြပါစေ တစ်နေ့ တော့ပြီးသွားမှာပါ
ရောက်ခါစကတည်းကကျွန်တော့်ကို ဝိုင်းပြီးစွတ်စွဲနေတာကိုခံရတယ် ဖြစ်ပုံကကျွန်တော်မှာ
စပြီးသတိထားမိတဲ့တစ်ရက်က ဘေးချင်းကပ်ခန်းကကောင်လေးက အခန်းတံခါးခေါက်ပြီး
မွှေတယ်လေ ကျွန်တော်တစ်ခွန်းမှပြန်မပြောမိ အခန်းတံခါးသာဖွင့်ပြီးသူရှာသမျှကို
ရပ်ကြည့်နေမိတယ် နောက်ဆုံးတောက်ခေါက်ထွက်သွားတော့မှ သတိပြန်ဝင်လာတာ သြော်
ပိုက်ဆံမရှိရင် သူခိုးထင်ကြတယ်လား အိမ်မှာဘယ်လိုနေလဲစားခဲ့လဲဆိုတာမေးဖူးကြရဲ့ လား
နောက်နေ့ သိလိုက်ရတာက သူ့ အတွင်းခံက အပြင်မှာလှန်းထားရင်း
ကျွန်တော်ကနွားနို့ကြိုက်တယ်အမြဲဝယ်သောက်ဖြစ်တယ် ဈေးမကြီးတာရယ် အမောလဲပြေ
ရေခဲသေတ္တာမှာနို့ဗူးတွေကအစီအရီ ဒါပေမယ့် ပြားစွန်းသာသာတန်တဲ့ နို့ဗူးတွေမှာ
သောက်ပြီးရင် မှင်နဲ့အမှတ်အသားအရစ်ကလေးတွေထားကြတယ် နောက်မှသိတာက
ကျွန်တော်ယူသောက်ခဲ့ရင်သိအောင်လို့ လေ.. တစ်ညအလုပ်ကပြန်လာတော့
ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ဧည့်ခန်းမှာနို့ ဗူးလေးနဲ့စောင့်နေတယ်
ငါမလိုချင်တော့ဘူး အဲဒီအတွက် ပိုက်ဆံပြန်ပေး...နို့ တောင်ခိုးသောက်တာအံ့ပါရဲ့ ”့ဆိုတော့
အားလုံးရှေ့ မှာဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့ ရှက်ရှက်နဲ့ ပိုက်ဆံထုတ်ပေးနေချိန်မှာ..
ကောင်မလေးရဲ့ ရည်းစားပြန်ရောက်လာတော့ မေးတယ်လေ..
ပြီးမှသူလဲ ရှက်ရှက်နဲ့ တောင်းပန်ပါတယ် သူမနက် ကကော်ဖီ သောက်တာပါ..
သူ့ ကောင်မလေး အလုပ်သွားနေလို့ သူသောက်တာပါဆို ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်..
စိတ်ထဲမှာတော့မေ့မယ်မထင်နဲ့ ပေါ့.. အလှည့်ဆိုတာရှိတယ်လေ..
ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင် ..အားလုံးရဲ့ အခန်းက
တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကတော့ ကျွန်တော်အတွက်နောက်ဆုံးသူတို့ တွေရဲ့ စွတ်စွဲမှု
နောက်ပိုင်းဒီလိုစွတ်စွဲမှုတွေလဲရပ်သွားတယ် ကျနော့်အတွက်လည်း ကောင်းသွားတယ်ပေါ့
ဖြစ်ပုံက.. တစ်နေ့ ကျွန်တော် ကြက်ကြော်စားတယ်..ဒီကိုရောက်ပြီးကတည်းက
စားချင်တာရယ်..အလုပ်အားတာနဲ့ အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိတာရယ်ကြောင့် ချက်စားတာပါ
ကြက်ကြော်နေတုန်း ပြန်လာတဲ့ (အတွင်းခံဘောင်းဘီပျောက်ဖူးတဲ့)ညီက ”အောင်မလေးဗျာ..
ညပိုင်းစားသောက်ဆိုင်ကပြန်လာချိန် အိမ်မှာမီးတွေလင်းနေတယ်ဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း
အိမ်ထဲလှမ်းဝင်ရုံနဲ့ ”ဟေ့လူ ခင်ဗျားခိုးစားတာမရှက်ဘူးလား..ခိုးစားတာဆိုရင်လဲ
တော်တော်လေးရှက်ဖို့ ကောင်းတယ်..မရှိရင်တောင်းစား..ကြွေးမယ်..ခိုးတော့မစားနဲ့ ဗျာ”
ဘာလို့လောကကြီးက အားနည်းတဲ့သူ ကိုဝိုင်းနှိပ်စက်တာကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေတာလဲ
တစ်အိမ်တည်းနေတဲ့တရုတ်က တခြားမြို့ ကနေပြန်လာတယ်
တစ်ညတော့သူက ”စိန် နင့်ကိုပြောစရာရှိတယ် နင့်အတွက်ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး
ဒါပေမယ့်တစ်ခုကောင်းတာက အဲဒီနေ့ ကစလို့ပေါ့ကျွန်တော့်ကို
စွတ်စွဲတာတွေ..စောင်းပြောတာတွေ နေ့ ချင်းညချင်းပြောက်သွားတယ်
”စိန် ရေ ငွေခဏလှည့်ပေးပါအုံး လူကြုံနဲ့ငွေပို့ချင်လို့”
ကျနော်ပြုံးမိပါတယ် ကျနော့်အပြုံးက အရင်နဲ့ အခုနဲ့အတူတူပါပဲ
သူတို့ကျနော့်ကိုပြုံးပြပါတယ် အရင်တုန်းကတော့ ခနဲ့ပြုံး အခုတော့ အားနာပြုံး
Comment on October 25th, 2008. e
Very Good True Story! I would punch them if I were in your shoes….
နှင့် မိမိကိုယ်ကို မိမိထိန်းချုပ်တတ်ခြင်းတို့ ဖြင့်စနစ်တကျပူးပေါင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။.. တဲ့
နွာနို့ဆို ကိုယ်မှ မသောက်တာပဲ..မသောက်ဖူးပေါ့..ငွေပေးစရာမလိုပါဘူး။
ကြက်သားလည်း အဲဒီအတိုင်းပဲလေ။ ဘာလို့ပေးရမှာလဲ။
အမဆို ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ မောင်လေးတော်ပါတယ်။
You feltalot of shame when you have nothing.When i read your story ,i feel angry them.So you should stay away from them.Next time you should give some lessons that they will know about their manners.Don’t be patient.
ဗျို့ ကိုစိန် ကျနော် မကျေနပ်ဘူးဗျို့ ..
အဲ့လို ကိစ္စတွေ မဖြစ်သင့်ဘူး …
ဘယ်နှယ့်ဗျာ … အဲ့လိုစွတ်စွတ်စွဲစွဲ ပြောရအောင် သူလည်း ကျောင်းသား
ကိုယ်လည်း ကျောင်းသား နိမ့်တဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး …
ပြီးတော့ မဟုတ်ရင်လည်း ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ပြန်တာဝန်ယူသင့်တယ် ..
သည်းခံတယ်ဆိုတာ ကောင်းပါတယ်ဗျာ .. ဒါပေမယ့် အမှန်တရားကို
ပျောက်ကွယ်သွားလောက်အောင် သည်းခံတာမျိုးတော့ အားမပေးဘူးဗျို့ ..
အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်ရဲရမယ်လို့ ကျနော် ခံယူမိတယ် ..
ကျနော်ဆိုရင် ဒီမှာ အပြစ်မရှိပဲ နိုင်ငံခြားသား ကျောင်းသားလေးတွေပါကွာ ဆိုပြီး ပါးလာရိုက်ပြီး ဖြဲတဲ့ ရဲ ကို ပြန်ထိုးလို့ လက်ထိပ်တန်းလန်းနဲ့
အချုပ်ခန်းထဲမှာ ၆ နာရီကျော် နေဖူးတယ် …
ဒါပေမယ့် ကျနော် ကျေနပ်တယ် … နောက်တော့လည်း ကျနော် မှန်နေတော့ ပြန်လွတ်ပေးရတာပါပဲ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး …
တစ်ယောက်တည်း ဆိုပေမယ့် ကျား တွေပဲဗျာ ဟုတ်တယ်မို့လား ..
ကိုစိန်ရေးထားတာတွေ ဖတ်မိတော့ တော်တော် ဒေါသ ထွက်မိတယ်ဗျို့ ..
အဲ့လောက်ကြီး သည်းမခံနဲ့ဗျာ ..
ပြောချင်ရာ ပြောသွားတဲ့ ကျနော့်ကိုလည်း စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဗျို့
မကျေနပ်ရင် ကျနော့်ဆီ လာပြန်ရေး စိတ်မဆိုးဘူး ဟီး ဟီး ..
အခုမှပဲသိတော့တယ်။ :P မောင်လေးဖိုးစိန် ပြန်လာဖတ်သွားပါတယ်.ကွန်မန့်တွေဖတ်ရင်းပေါ့။ ဟုတ်တယ် မောင်လေးမိုးသောက်ပြောသလိုပါပဲ
ပျောက်ကွယ်သွားလောက်အောင် သည်းခံတာမျိုးတော့ အားမပေးဘူးဗျို့ )ဆိုတဲ့ စာသားလေးအတိုင်း အမှန်တရားပျောက်ကွယ်သွားလောက်တဲ့ အထိတော့ ထပ်ပြီးသည်းမခံပါနဲ့ မောင်လေးရေ.. အာဂျား..အာဂျား..ဖိုက်တင်…မောင်မိုးသောက်လိုတော့ လူဆိုး လို့ နဲနဲတော့အပြောခံရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်မှန်တဲ့အတွက် ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံတယ်.ကျေနပ်တယ်လေ။
မောင်မိုးသောက်ဆီမှာ စီဘုံးအပြည့်ရေးသွားလို့ အမ ပြန်လာရေးတာမဟုတ်ဖူးနော်။ခင်မင်မှုနဲ့ ပြန်လာအားပေးတာပါ။
စိန်သာကောရေ .. တတ်နိုင်သလောက်သာ သီးခံပါဗျာ .. သီးခံနိုင် တဲ့သူက အောင်မြင်တာပါပဲ။ ဘ၀မှာ နာကျင်သမျှကို သင်ခန်းစာ အဖြစ်သာမှတ်ပါ ဒီလိုပြောရတာဟာ မလွယ်မှန်းသိပါတယ် ဘာလို့ ဆိုတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ အများကြီး သင်ယူခဲ့ရလို့ပါ .. :)
Comment on October 26th, 2008. e
စိတ်ရှည်တယ်၊ သည်းခံတယ်ဆိုတာ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိတော့ရှိတယ်လေ။အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ နင်ကလည်း လွန်လွန်းပါတယ်.။ ငါ့သူငယ်ချင်းလို့မပြောရဘူး အမြဲတစ်ဘက်စွန်းရောက်တာပဲ။ တတ်နိုင်သမျှ ဘယ်နိုင်ငံပဲရောက်ရောက် မြန်မာတွေကိုရှောင် ဇယားရှုပ်တယ်.။ ကောင်းတဲ့သူလဲရှိသလို မကောင်းတဲ့သူလည်းရှိနိုင်တာပဲ။.
When I read your story , I remember my situation at Singapore.Life is like this.You have no money , they do like this.So we have to try to be rich.”Money make everything ” Before I didn’t accept it but i accept it now.Because We have no money ,We can’t solve problems.You want to do anything matter , money is in front of it.But life is circle so they do like this , they will feel like this one day.
I don’t believe that’s you. But it’s true. I appreciate you. you need sometimes patience but if you should not be always like this because some people will look down on you.
For the successful life, patience is really necessary. You should use it according to the time and circumstances.
ကိုမိုးသောက်ဆီမှာတွေ့လို့ စူးစူးစမ်းစမ်းလာဖတ်မိပါရဲ့ ရင်နင့်စရာတွေဖတ်လိုက်ရတယ် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် အဲလောက်သီးခံနိူင်တာ လေးစားတယ် စာတွေဖတ်နေတုန်း စော်ကားမော်ကား စွတ်စွတ်စွဲစွဲ ပြောတဲ့ပြုတဲ့သူတွေကိုကြောက်နေမိတယ် ကိုယ်နဲ့များကြုံမလားလို့လေ ကိုဖိုးစိန်ရဲ့သီးခံနိူင်စွမ်းကိုတော့ ဖတ်ရင်းနဲ့ငိုင်နေရတယ် လေးစားတယ်ရှင် နောက်ဆုံးရလဒ်ကကောင်းပါတယ် စိတ်ထားကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတာ အချိန်နဲ့အမျှအကျိုးခံစားရတဲ့အကြောင်းတော့သိသွားတယ် ” ခင်ဗျားမှန်နေရင် အကျိုးပေးမှာပေါ့ ” နောက်နောင်လဲဒီလိုကိစ္စဈတွနဲ့ကင်းပါစေ ပျော်ရွှင်ပါစေနော် :D :D :D :D :D
ဖတ်ပြီးရင်ထဲမှာ မောကျန်ခဲ့တယ် မောင်လေးရေ… မရှိခိုးနိုး မလှစုန်းရိုးတဲ့… လူတွေဟာ တခါတခါ သိပ်ကို ခက်ပါတယ်။ အဆုံးစွန်ထိ သည်းခံနိုင်ခဲ့ပြီး စိတ်ထားပြည့်ဝခြင်းကို ပြခဲ့တဲ့ မောင်လေးကို အရမ်းကို လေးစားမိပါတယ်။ သေချာမစမ်းစစ်ဘဲ တဘက်သတ် နိုင်လိုမင်းထက် စွပ်စွဲခဲ့သူတွေ စိတ်ထားမမှန်သူတွေလည်း ၀ဋ်ကြွေးဆိုတာနဲ့ မလွဲမသွေကြုံရဦးမှာပါ… ဘ၀မှာ ဒီလိုလူတွေနဲ့ ကင်းပြီး အောင်မြင်မှုတွေ အများကြီး ဆက်တိုက်ရပါစေ မောင်လေးဖိုးစိန်ရေ…
ကျွန်တော့်အပေါ်ကိုနားလည်ပေးကြတဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ.. ကျွန်တော့်ကိုလာအားပေးတဲ့ မမဝါ..မမသူသူ.. မမပုလဲ…မမမက်မက်..မမဇာဇာ..ကိုဗီလိန်..ကိုမိုး နဲ့ ကိုသောက်တို့ ကို အရမ်းပဲခင်မိသွားတယ်.. အမတွေ အကိုတွေရဲ့ အားပေးမှုကိုသာ အဲဒီ အချိန်က ရခဲ့ရင်ကျွန်တော် ရဲ့ မကောင်းဆိုးရွားဝင်ပူးတဲ့ရက်တွေမှာ ကျွန်တော်ဒီလောက်မခံစားရပါဖူး.. ကျွန်တော်ဟာ ငယ်ငယ်က ကမ်းကုန်အောင်ဆိုးခဲ့ပေမယ့်.. ဒီရောက်လာတဲ့အချိန်က စလို့ကျွန်တော်ဟာ တော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားတာကိုယ်ကို ကိုယ်တောင်မယုံပါဘူး..ဒါပေမယ့်အခုတော့ ကျေနပ်တယ်ဗျာ.. လိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုရလိုက်တယ်ပေါ့…
ကျွန်တော်ဒီနေ ရာလေးက နေပြီး..
ကျွန်တော်ကို အမြင်ကတ်စွာ ညီလို မောင်လို ချစ်ကြတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ တန်းဖို မဖြတ်နိုင်တဲ့
ကို လင်းလင်းဇော်..ကိုအောင်မြင့်ဦး..ကို လပြည့်..ကိုစိုင်း..မသန္တာလွင်..မသန္တာဆွေ.. အိခိုင်ဇင်..အိခိုင်အေး..မြမြအေး.. ကလျာ တို့ နဲ့ အတူ..
ကျွန်တော့်ကို ဘလော့ကနေတဆင့် ညီလို မောင်လို ခင်ခဲ့ကြတဲ့ ကိုကိုမိုးသောက်ယံ..ကိုကိုမိုးသောက်…မမဝါ..မမသူသူ..မမမက်မက်..မမဇာဇာ..မမပုလဲ..တို့ ကို ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ ..ကျွန်တော်အားလုံးကို အမလို အကိုလို လေးစားချစ်ခင်ပါကြောင်းပြောပါရစေဗျာ..
ei khai aye
it’s me ei khine aye
i hate them all.who are they? can you give me their name?let them go to the hell!
Comment on October 27th, 2008. e
You don’t tell me.Because of you and me are friend.
Keep the friendship between you and all. This is your life.
မိုက်ရိုင်းလိုက်တာကွာ.. စွတ်စွတ်စွဲစွဲ နဲ့.. တကယ်ဆို ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာ
လူမျိုးတွေပဲ..ဒီလောက်ထိတော့ မပြောသင့်ဘူး.. လူ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့လူတွေ။
၀မ်းအပြင်အိတ်မပါတာ သူတို့တွေ မသိကြဘူးလားမသိဘူး… သေသွားရင်
အဲလိုလူမျိုးက ပြိတ္တာဖြစ်မဲ့ဟာတွေလို့ထင်တယ်… ဖတ်ရတာ တော်တော်
ရင်ထဲမကောင်းဖြစ်သွားသလို ဒေါသလည်းဖြစ်မိတယ်… ကိုယ်ပြောချင်ရာပြော၊စွတ်စွဲချင်ရာစွတ်စွဲပြီး အမှန်တရားပေါ်လာတော့မှာ ပြန်တောင်းပန်ဖို့ဝန်လေးကြတဲ့အဲ့လိုတန်ဖိုးမရှိတဲ့ လူတွေကိုဝေးဝေးကသာရှောင်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်..ပြီးတော့.. အခုလိုသည်းခံနိုင်တဲ့ခန္ဒီစပါရမီ လေးကိုလည်းဂုဏ်ယူပါတယ်.. ဘာပဲပြောပြော မေတ္တာမပြတ်ပဲ..အပြုံးလေးနဲ့ပဲအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တဲ့ ဦးဦးဖိုးစိန် ကိုလေးစားပါတယ်…. မေတ္တာသည်သာအေးမြရာ၏..တဲ့။ အမြဲနှလုံးသွင်းပါ.. နော်…မက်မက်တို့လည်းခင်တတ်ပါတယ်..
Comment on October 28th, 2008. e
If U r in Myanmar ,U should take revenge them.Money is the second God for them.For us Friendship is more important than money , I think..
Comment on November 19th, 2008. e
ဒီတစ်ပုဒ်ဖတ်ရတာ တော်တော်စိတ်မကောင်းဘူး..နင်ဒီလောက်သည်းခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ငါမထင်ခဲ့ဘူး.. နင်ကိုငါ အရမ်းချီးကျူးတယ်..နင်တော်တယ်.. အားလုံးကို နင်နိုင်လိုက်တာပဲ..
ဒါပေမဲ့ ငါစိတ်မကောင်းတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်.. နင်ပြန်ရေးထားတဲ့ထဲမှာ နင်က ငါကို နင့်ရဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းတွေ စာရင်းထဲမှာလည်း မရှိဘူး..ခုမှ စာဖတ်ရင်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းစာရင်းမှာလည်း..တခြားစာရင်းမှာလည်း မရှိဘူး.. နင် ငါကိုလုပ်ရက်တယ်..နင်စာလေးတွေကို နင်ဖတ်စေချင်မှန်း သိလို့ရော..နင့်ကိုခင်တဲ့စိတ်နဲ့ရော.. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ရော ဆိုတဲ့ ရောပေါင်းများစွာနဲ့ ငါဖတ်ပေမဲ့ ငါ့ကို နင့််စာရင်းထဲ မသွင်းထားဘူး.. ပြောတော့ ငါ့ကို ခင်တယ်တဲ့..ဒီလိုလား.. ငါလည်းခံစားရတယ်.
Writer Sein Lyan Time 9:12 am
"စိန်".. ရေ နဲ့
ပြောသမျှကို နားလည် ခွင့်လွှတ် သဘောထားကြီး တတ်တာ တော်လိုက်တာ
ကောင်စုတ် နင်က မျက်ရည်မကျပေမယ့် ငါကကျတယ်ဟဲ့
ဘာလို့ ဒီလိုပိုစ့် ကိုတင်တာလဲ
read pii.. sate ma kg phyit thwar tal.. ta kal par...
ko ko Sein.. ko ko Sein ka မျက်ရည်မကျပေမယ့် I ကကျတယ်.... ti lar:
ko ko yal
ပိုစ့်လေးကြောင်း... paing ၀မ်းနည်းနေတယ်
chit tae.. paing (aHEEEEE)
ကိုဖိုးစိန် .. သေသေချာချာ ဖတ်သွားပါတယ်..။ ကိုယ်စားလဲ ခံပြင်း ဒေါသထွက်မိပါတယ်။ သည်းခံနိုင်တဲ့ ကိုဖိုးစိန်ကိုလဲ လေးစားမိပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်သာဆိုရင် မရဘူးဗျာ။
တကယ်တော့ စဉ်းစားညဏ်နဲတဲ့သူတွေ တွေ့ ရင် ဒီနည်းကတော့ အကောင်းဆုံးပါ။
အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ..။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းနိုင်စွမ်းကိုတော့ လေးစားသွားပြီဗျာ။
စွတ်စွဲခံရတာတစ်ကြောင်းဖတ်လိုက်၊ ဘယ်လိုပြန်ပြောလိုက်ပါလားနဲ့ စိတ်ထဲက ပြောလိုက်လုပ်နေမိတာ...။
စိတ်မကောင်းပါဘူး... အဲဒီမှာပဲ ဆက်နေနေသေးတယ်လား...။
အရင်က ဖတ်ပြီးသွားပြီ ဆိုပေမယ့်လည်း ထပ်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်...... ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိအောင် စိတ်မကောင်းထပ်ဖြစ် သွားပါတယ်....
ရင်ထဲမှာလဲ မောသွားတယ်... :(
မီးလေးကအခုမှဖတ်ရတာ အသဲယားလိုက်တာ အဲ့လိုသည်းမခံနိုင်ပါဘူးတော် ဖိုးစိန်ကိုချီးကျူးတယ် မီးလေးဆို ဟွန်းသိသွားမှာပေါ့.......
မီးလေးတုန်းကယောင်္ကျားလေးနဲ့ဖြစ်တာ မကျေနပ်လို့ ငရုပ်ကျည်ပွေ့ နဲ့ ဟိုဘက်ခန်းမှာနေနေတာတောင်လှမ်းပစ်တာ
3 April 2009 at 11:49
နံပါတ်မှာ ၁၃ ဦးထားတယ်...
ဘယ်ပို့စ်လဲမသိဘူး အရင်ဖတ်လိုက်ဦးမယ်.. ဖိုးစိန်ရဲ့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မနော်ထက်တော့သာသွားပြီ.း) ဒီမောင်နှမတွေပဲ ပြိုင်နေကြတာ.း)
စိတ်ရှည်သည်းခံ လမ်းကြောင်းမှန် မောင်းရန်မော်တော်ကား
မတရားလုပ်တဲ့ လူတွေကိုလဲ သြချပါရဲ့.
သည်းခံလွန်းတဲ့ စိန်ကိုလဲ အံ့သြပါရဲ့.
လူတွေဆိုတာ သည်းခံလွန်းရင် ရောင့်တက်တယ်.
စိန် မဘန်းဘူးဆိုတာ ယုံပါတယ်.
စိတ်မဆိုးတော့ပါဘူး. ဘယ်သူဘန်းလဲဆိုတာတော့ ပြောပြသင့်တယ်.နော်.
အလွန့် အလွန် အနောက်သန်သော.....
ကိုယ်တော့ နဂါးမှန်းသိအောင် အမောက်ထောင်ပြစေချင်တယ်
ဦးကျော်ဟိန်းကို တော့ သိပ်မကြိုက်ပါဘူး။ သူ့ဇာတ်ကားထဲက စကားလေးတစ်ခွန်းကိုတော့ ကြီုက်တယ်
"သည်းခံနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာထက် ကျော်သွားရင် အလကားလူ" ဆိုလား
ကိုဖိုးစိန်ကိုတော့ ချီးကျူးပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ ပြန်မပြောဖြစ်ရင်တောင်မှ အဲဒီမှာ နေတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
အားငယ်သူကိုအားပေးပါ ဆိုတဲ့ စကားပုံကိုပြောင်းရမယ်
အားငယ်သူ့ ကို အားပေး တော့ ပိုခံရတာပေါ့
အဲ့လို မြင်မိတယ် သူ့ တို့ ကဖိအားပေးနေပေမယ့်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို ဖတ်ခွင့်ရလို့ လေ
အစ်ကိုရေ အရင်ကတည်းက မန့်ဖူးမယ်ထင်တယ် ။ ဖတ်တော့ဖတ်ဖူးတရ် ။ ကြိုက်ပါတယ် ။ လူကိုတော့မကြိုက်ဘူး ။ ဘာလို့ထိပ်ဆုံးမပြောလည်း ။ မကျေနပ်ဘူး အရက်ပြန်တိုက်မှကျေနပ်မယ် ။ ဒါပဲ ။ ခုလာတိုက်ပါ ။ ဟဟ ။ ခံစားရပါတ၇် အစ်ကိုေ၇ ။ လူဆိုတဲ့သတ္တ၀ါမျိုးက ဒီလိုပါပဲလေ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူဖြစ်နေတာကိုး ။ အဆင်ပြေပျော်၇ွှင်ပါစေခင်ဗျာ ။
လူတွေရဲ့ အနိမ့်အမြင့် ဘ၀အခြေအနေတွေကို သာယာ အဟုတ်ကြီး ထင်တတ်တဲ့ မပြည့်ဝတဲ့ လူတွေရဲ့ သဘောကို အသေအချာ ခံစားလိုက်ရတယ်။
ခုထိ သူတို့နဲ့ အတူနေတုန်းလား မောင်လေး။
ခပ်ဝေးဝေးမှာ အေးအေးနေပါလေ။ ကိုယ့်စိတ်တွေ ညစ်နွမ်း ကုန်ပါ့မယ်။ သည်းခံ ခွင့်လွှတ်တတ်တာကို ချီးကျူးမိပါတယ်။ အမသာဆို မမှန်ရင် မခံဘူးဘဲ။ တခြားနေရာမှာ သဘောကောင်းပေမဲ့ အနိုင်ကျင့်ရင်တော့ သည်းမခံတတ်ဘူး။ ဒီလိုလူတွေနဲ့ ဘ၀မှာ ခဏတွေ့မှာမို့ ဆောရီးပဲ..
(ပြောရင်း ပြောရင်း ကိုယ့်စိတ်တွေ ပေါ်ကုန်ပြီ :)
4 April 2009 at 02:15
ကဲ သာကောရေ ဒီပို့စ်လေးက ပထမအကြိမ်တုန်းကလည်း မန့်ခဲ့ပီးသားပါ ဒီတခေါက်လည်း အတူတူပါပဲ .. သည်းခံနိုင်ရင် အောင်မြင်တာပါပဲနော် .. ကိုယ့်စိတ်ကတော့ ကိုယ်သိပီးသားပဲ .. အောင်မြင်ပါ သာကောရေ :)
တော်တေ်ာ သည်းခံနိုင်တာပဲ ကိုဖိုးစိန်က
ကျွန်တေ်ာဆိုရင်တော့ ဘာ ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုမှန်ရာကို
ကိုဖိုးစိန်ရေ .... အံ့သြလွန်းမက အံ့သြမိပါရဲ့ ... ကျွန်တော် ဒီလောက်တော့ သီးမခံနိုင်ဘူးဗျာ .. အမှန်အတိုင်း ပြောတာပါ ...
စနစ်တကျပူးပေါင်းထားခြင်းဖြစ်သည်” ဆိုတဲ့ စကားလေးကတော့ တကယ်ကို အမှတ်တရလေးပါပဲ။ ကောင်းလွန်းပါတယ်ဗျာ ... အရေးအသားကလည်း ညက်ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်တွေကလည်း တကယ်ကို ထိပါတယ်။ နောက်ဆုံး ရလာဒ်တွေ ဘယ်လောက် ကောင်းလာမယ်ပဲ ပြောပြော ကျွန်တော်ကတော့ အဲလို အခြေအနေမျိုးတွေမှာ စိတ်မထိန်းနိုင်ဘူးဗျာ ... ကျွန်တော်လည်း အများကြီး ကြိုးစားရအုံးမယ် ... ကို ဖိုးစိန်လို သီးခံနိုင်လာအောင်ဖို့ ... အားလုံး အဆင်ပြေပါစေဗျာ .. ဒီ့ထက်မကပေါ့ ... အားလုံးရဲ့ အထက်က ဖိုးစိန် တစ်ယောက် အဖြစ်အနေနဲ့ပေါ့ :)
အကို ဒီလိုမျိုးတွေဖတ်ရတော့ စိတ်မကောင်းဘူး။ ဒေါသလည်းထွက်တယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံကနိမ့်ကျနေလို့ သူများနိုင်ငံသားတွေက နှိမ်တာခံနေရချိန်မှာ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း ဖေးမရမယ့် အစား ဒီလိုပြောရက်ကြတာကို အံ့သြမဆုံးဘူး။ နို့တဘူး၊ ကြက်ကြော်တစ်ကောင်၊ အတွင်းခံတထည်ဟာ ဘယ်လောက်တန်မှာလဲ။ တကယ်လို့ အကိုမှားယူမိတယ်၊ သုံးမိတယ်ဆိုရင်တောင် ဒီလိုဖြစ်ဖို့မကောင်းဘူး။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့မိဘက မွေးလာပေမယ့် ယဉ်ကျေးမှုသိတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကဖြစ်ပုံမရဘူးထင်တယ်။ နိုင်ငံခြားအထိတောင် ကျောင်းလာတက်နေပြီး စိတ်ဓါတ်အောက်တန်းကျလွန်းမနေဘူးလား။ ဒီလိုလူငယ်တွေချည်းပဲသာဆို မြန်မာနိုင်ငံလည်းရှေ့ရေးရင်လေးစရာပဲ။
နင်မို့လို့ ဒီလိုသည်းခံနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါသာ.နင်ိ့နေရာမှာ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့ လူတွေများ ဒီလို တွေးကြ၊ ပြောနိုင်ကြတာလဲ။ တစိမ်းတွေလဲမဟုတ်ဘူး။ တမြေထဲက လာတဲ့ လူတွေ။ မကူညီချင်နေပါ။ ဒီလိုတော့ မပြောသင့်တယ်။
ဇာတ်ဆရာမောင်စိန်မိုလို့ ပေါ့...အာမီတို့နဲ့ တွေ့လို့ကတော့....:)....ကျွန်တော်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး သည်းခံပေါင်းသင်းတတ်ပါတယ်ဗျာ..ဒါပေမယ့် မောင်စိန်လောက်တော့ သည်းမခံနိုင်ဘူးဗျ...အဲဒီလောက်ပြောတဲ့သူလည်း မတွေ့ဖူးသေးတာလည်းပါတယ်...ထွက်နေတဲ့ဒေါသက ရင်ဝမှာပဲ ပြန်မျိုသိပ်ထားရတယ်...ကျင့်သားတော့ရနေပါပြီ...အခု လို သည်းခံနိုင်တာ အရမ်းပဲချီင်္းကျူးပါတယ်ဗျာ...Never ,never,never give up....စိတ်ဓာတွေကျဆင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီစာလေးကို သတိရပါတဲ့ :)
You're amazingly tolerant. It's sad that your fellow countrymen treat you that way.
Ko Pho Sein
You are so great. I do like your mind but friendly speaking, sometimes we need to show who we are. Don't stay with them anymore. ( I have such experiences, OMG, unbelievable some MM people)
နှင့် မိမိကိုယ်ကို မိမိထိန်းချုပ်တတ်ခြင်းတို့ ဖြင့်စနစ်တကျပူးပေါင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
သည်းခံခွင့်လွှတ် ကူညီခြင်းဖြင့် မြင့်မားစော စိတ်ဓာတ် ပိုင်ဆိုင်သူတယောက်ကို လေးစားပါတယ်ဗျာ။
စကားထဲက ဇာတိပြဆိုတာ ဒါပါပဲ။
ဒီလိုပြောဆို စွတ်ဆွဲသူတွေရဲ့ စကားမှာ သူတို့ ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားတွေ ပါနေတယ်လေ။
ဘယ့်နဲ့ သူများ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ ယူဝတ်စရာလား။
အတူနေသူ အချင်းချင်း ရပ်ဝေးမှာ ကံရှိလို့ ဆုံတာ နွားနို့ တစ်ခွက်အတွက် ဒီလို နင့်နင့်သီးသီးပြောဖို့ မလိုပါဘူး။
သည်းခံလိုက်တာကောင်းပါတယ်။ ခွေးရူးနဲ့ ပြိုင်ကိုက်ရင် ကိုယ်ပဲ နစ်နာမှာပေါ့။
တော်တော်မိုက်ရိုင်းစော်ကားတတ်တဲ့ သူတွေပဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကင်းအောင်နေတာကောင်းပါတယ်။